TOP News: Maamulka Gobolka Gedo oo ka ajwaabay eedeyn kaga timid Ciidamada Kenya. – Gedo Times
TOP News: Maamulka Gobolka Gedo oo ka ajwaabay eedeyn kaga timid Ciidamada Kenya.
1st February 2016 admin Wararka Maanta 0
Kadib markii Dowladda Kenya ay sheegtay inay shaki ka qabto in ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ay ku lug leeyihiin dagaalkii ka dhacay Magaalada Ceelcadde ee Gobolka Gedo, ayaa Maamulka Gobolka Gedo ee Dowladda Somaliya waxa ay ka hadleen eedeymaha ka soo yeeray Kenya.
Guddoomiye ku xigeenka Maamulka Gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Al Qaadi, ayaa beeniyay wararka ku aadan in ciidamada Dowladda ku lug leeyihiin weerarkii Ceelcadde.
Wuxuu sheegay hadalka ka soo baxay Dowladda Kenya ee ay ku sheegtay inay shaki uga qabto in ciidamada Dowladda ku lug leeyihiin weerarkii Ceelcadde inuu yahay mid Kenya ay ku doonayso inay ku baneysato sii wadista Duqeymaha ay ka geysatay Gobolka Gedo.
Maxamed Xuseen Isaaq Al Qaadi, ayaa isweydiiyay inaysan jirin sabab ciidamada Dowladda Somaliya ay qayb uga noqdaan dagaalkaasi, maadaama ciidamada Kenya iyo kuwa Dowladda ay leeyihiin hal cadoow, cadowgaasi oo ah Shabaab.
Isaga oo hadalka siiwata Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Gedo, wuxuu tilmaamay Degmada Ceelcadde ee Gobolkaasi inay geynayaan ciidamo ka tirsan Dowladda Somaliya si loo sii wado dagaalka ka dhanka ah Shabaab.
Guddi Dowladda Kenya ay u xilsaartay Baaritaanka ku aadan weerarkii Degmada Ceelcadde 15-kii Bishii dhamaatay ayaa sheegay inay shaki ka qabaan in ciidamada Somaliya dagaalkaasi ku lug lahaayeen, maadaama Barta Isgaarsiinta ciidanka Kenya ee Ceelcadde la jaray ka hor inta uusan weerarka dhicin.
Kenya ayaa ciidan badan looga laayay weerarkii cuslaa ee ka dhacay Degmada Ceelcadde, inkastoo ilaa hada Madaxda Kenya aysan shaacin tirada ciidamada looga dilay weerarkaasi.
Kulan looga soo horjeedo 4.5 oo lagu qatay Mnpls Mn USA
TOP News; Kenya oo la dagaalanka Alshabaab Dartii usoo iibsatay gaadiid Badan oo aan Xabadu Karin.”Tiraa gaadiidka”